के गर्ने यदि बिरालो ओछ्यानमा पल्ट्यो | Noti बिरालाहरू
तपाईंको बिरालोले उसले ओछ्यानमा नगर्न के गरिदियो? यद्यपि "आश्चर्य" केहि हदसम्म सामान्य छ यदि यो एक बिरालाको बच्चा हो भने आफैलाई राहत दिन सिकिरहेको छ, यदि यो वयस्क हो भने यो चिन्ताको लागि पर्याप्त कारण भन्दा बढी होखैर, त्यहाँ हरेक घरेलु बिचको जीवन मा एक समय आउँछ जब तिनीहरूले आफ्नो कचौरा बक्स को प्रयोग गर्न सिक्न, र जब तिनीहरू छैन, यो किनभने तिनीहरूलाई केहि हुन्छ।
त्यसोभए हेरौं के गर्ने यदि बिरालो ओछ्यानमा पल्टन्छ.
1 १.- उसलाई गाली नगर्नुहोस्
2 २-- यसलाई अवलोकन गर्नुहोस्
3 - फोहर सफा गर्नुहोस्
4 -.- तनाव जारी गर्नुहोस्
5 किन तपाईंको बिरालो तपाईंको ओछ्यानमा पेशाब गर्दछ
5.1 बिरालाहरूले अनुपयुक्त रूपमा पेशाब गरेमा चिकित्सा समस्या हुन सक्छ
5.2 तनाव र चिन्ताले अयोग्य पेशाब निम्त्याउन सक्छ
5.3 तिम्रो बिरालोले तिमीलाई याद गर्न सक्छ
5.4 तपाईको किट्टी एकदम रमाईलो छैन
6 अरू के तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ
१.- उसलाई गाली नगर्नुहोस्
थोरै नराम्रो महसुस गर्न सजिलो छ, र क्रोधित पनि छ, जब बिरालोले ओछ्यानमा उसको व्यवसाय गर्दछ, तर हामीलाई वास्तविकतामा नराम्रो महसुस गराउनुको अतिरिक्त। यो उसलाई गाली गर्न कुनै राम्रो काम गर्दैनकिनकि उसले रीसलाई उसले गरेको कामसँग सम्बन्धित छैन किनकि यो सायद धेरै लामो समयदेखि भएको छ।
साथै, न तपाईले उसलाई हिर्काउनु पर्छ न हच्नु पर्छकहिले पनि होइन। त्यसो गर्नाले ऊ हामीलाई केवल डराउँछ।
२-- यसलाई अवलोकन गर्नुहोस्
हो, यसलाई हेर्नुहोस्। ऊ आफैंको सामान्य र सहजै राहत पाउनको लागि आफ्नो कचरा बक्समा जान सक्छ कि भनेर हेर्न जाँच गर्छ। घटनामा जब तपाईले यो देख्नुहुन्छ कि यसले तपाईको लागत चुकाउँछ, तपाईलाई दुखाई र / वा खुजली महसुस हुन्छ, तपाईलाई कुनै प्रकारको समस्या छ वा पेशाब र / वा मलमा रगत छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ जाँचको लागि, तपाईलाई संक्रमण हुन सक्छ।
- फोहर सफा गर्नुहोस्
बिरालो एकदम सफा जनावर हो र यदि फोहोर छ भने फोहोरको बक्समा आफैलाई राहत दिदैन। त्यसकारण, यो सुविधाजनक छ दैनिक स्टूलहरू हटाउनुहोस् र हप्तामा कम्तिमा एक पटक ट्रे सफा गर्नुहोस्। मा निर्भर गर्दै बिरालाहरूको लागि बालुवा जुन तपाईंको फ्रीले प्रयोग गर्दछ, तपाईं यसलाई ट्रेमा एक महीना सम्म रिफिल गर्न सक्नुहुनेछ।
-.- तनाव जारी गर्नुहोस्
सफा हुनुको साथै यो अत्यन्त संवेदनशील पनि हुन्छ। यदि पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण छ, वा यदि पशु तनावग्रस्त छ, सामान्य कुरा यो हो कि यो यसको आवश्यकताहरू यो गर्न सक्छन् जहाँ यो गर्न सक्छन्। त्यसोभए यदि तपाइँ नराम्रो समय पाउँदै हुनुहुन्छ, हिंड्न, व्यायाम गर्न, वा तपाईंलाई शान्त हुन सबैभन्दा मन पर्ने कार्य गर्न हिचकिचाउनुहोस्। तपाईंको चार-खुट्टे मित्र तपाईंलाई धन्यवाद दिनेछ, र तपाईं दुबै बाँच्न सक्नुहुन्छ 😉
किन तपाईंको बिरालो तपाईंको ओछ्यानमा पेशाब गर्दछ
कसरी अगाडि बढ्ने जान्ने बाहेक, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईंको बिरालो किन ओछ्यान भिजेको छ। यदि तपाइँ तिनीहरूको व्यवहार बुझ्नुहुन्छ भने, कसरी कार्य गर्ने भनेर जान्न सजिलो हुन्छ ताकि तिनीहरूले त्यो व्यवहार गर्न छोडे। यो एक धेरै निराशाजनक चीजहरू मध्ये एक हुन सक्छ जुन तपाईंलाई बिराला मालिकको रूपमा हुन सक्छ - तपाईंको बिरालो तपाईंको ओछ्यानमा पेशाब गर्दैछ। बिरालाहरूले किन यस्तो गर्छ र यसलाई रोक्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
बिरालाहरूले अनुपयुक्त रूपमा पेशाब गरेमा चिकित्सा समस्या हुन सक्छ
पहिलो कुरा विचार गर्नु जब तपाईंको बिरालाले फोहोर बक्स बाहिर पिसाब गर्दै छ कि त्यो एक चिकित्सा समस्या हुन सक्छ। मूत्र पथ संक्रमण, मधुमेह, र मृगौला रोग बिरालाहरुमा सामान्य अवस्था हो जुन फोहोर बक्समा पुग्न असमर्थता वा कचरा बक्स प्रयोग गर्न घृणाको कारण हुन सक्छ। यदि तपाईंको बिरालो उसको ओछ्यानमा वा अरू फोहोर बक्स बाहेक अन्य ठाउँमा पेशाब गर्दछ भने, पशु चिकित्सकलाई हेर्नुहोस् यदि उसको समस्या छ भने।
तनाव र चिन्ताले अयोग्य पेशाब निम्त्याउन सक्छ
चिकित्सा अवस्था पछि, तनाव र चिन्ता बिरालाहरुमा अनुपयुक्त पेशाब को सबैभन्दा सामान्य कारण हो। बिरालाहरूलाई धेरै चीजहरूमा तनाव वा चिन्ता लाग्न सक्छ जुन मानवले तुरून्त चिन्न सक्दैन।
खराब फोहर बक्स सर्तहरू केहि बिरालाहरु को लागी मुख्य कारण हो। पर्याप्त सफा नहुने बक्स, त्यस्तो ठाउँमा छ जसलाई बिरालोको बच्चालाई सुरक्षित लाग्दैन, वा बिरालालाई आपत्तिजनक लाग्ने कूवा समावेश गर्दछ, एक फस्टाइल बिरालोका लागि तनावपूर्ण परिस्थितिहरू हुन्, र ती सबै कारणहरू अर्को पक्षमा पेशाब गर्छन्। यसलाई रोक्नको लागि, निम्न सुझावहरू पालना गर्नुहोस्:
निश्चित गर्नुहोस् कि दिनमा धेरै पटक लिटर बक्स बाहिर लिनुहोस्, खाली र हप्ताको तातो साबुन पानीले बाकस धुनुहोस्, र बक्स हरेक छ महिनामा बदल्नुहोस्।
तपाईंसँग बिरालाहरू जत्तिकै धेरै फोहर बक्सहरू राख्नुहोस्। बिरालाहरूले फोहोर फोहोर बक्समा पेशाब गर्न मनपराउँदैनन्, र यदि तपाईंसँग पर्याप्त बक्सहरू छैन भने तिनीहरू द्रुत नै फोहोरमा जान्छन्।
तपाईंको घरको प्रत्येक तलामा कम्तिमा एउटा कचरा बक्स राख्नुहोस्। बिरालाहरूले नचाह्न सक्छन् वा बक्सको खोजीमा टाढा यात्रा गर्न सक्षम नहुन सक्छन् जब तिनीहरू जानु पर्छ।
ठूलो फोहोर, भारी यातायात, वा बिरालोलाई कुकुर वा अन्य बिगारीका साथीहरू द्वारा "फन्दामा पार्न" सक्ने ठाउँमा फोहोरको बक्स नराख्नुहोस्।
बिरालाहरुलाई नयाँ परिवार सदस्य को जोड को बारे मा तनाव हुन सक्छ। (मानव, बिग्रेको वा केनाइन), घर, आगन्तुकहरू वा निर्माण वा घरमा अन्य पावरहाउसमा मानिसहरूका कार्यतालिकामा परिवर्तन।
तिम्रो बिरालोले तिमीलाई याद गर्न सक्छ
यदि तपाईको तालिकामा परिवर्तन आएको छ वा अचानक तपाईले तपाईको बिरालोसँग कुराकानी गर्न जति समय खर्च गर्नुहुन्न पहिले उसले तपाईको ओछ्यानमा पेशाब गर्न सक्छ। उसको सुगन्धलाई तपाईंको साथ मिलाउँदा त्यसले तपाईंको अनुपस्थितिमा तपाईंको नजिकको महसुस गर्न सक्दछ।
तपाईको किट्टी एकदम रमाईलो छैन
धेरै मानिसहरु स्वाभाविक रूप मा लाग्छ कि एउटा बिरालो जो उनीहरुको ओछ्यानमा पेशाब गरिरहेकी छ यति धेरै गरीरहेको छ; कि ऊ केहि चीजको बारेमा रिसाएको छ र आफ्नो मालिकबाट बदला लिने कोशिश गर्दैछ। यो मामला छैन। बरु, तपाईंको बिरालोले केवल केहि सामना गर्न प्रयास गरिरहेको छ, यो एक चिकित्सा अवस्था वा केही प्रकारको तनावपूर्ण स्थिति हो, र flines मानिस भन्दा फरक सामना।
अरू के तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ
माथिका टिप्पणीहरूको साथसाथै, हामी तपाईंलाई यो समस्या समाप्त गर्न केही थप सल्लाहहरू दिइरहेका छौं, तर सम्झनुहोस् कि उसलाई गाली गर्नु भनेको समाधान होइन। तपाइँको बिलकुल मायाको साथ व्यवहार गर्नुहोस् र सबै मायाको लागि यसलाई प्रेम गर्नुहोस्। सुझावहरू:
आफ्नो बिरालालाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। पहिले तपाईले आफ्नो बिरालोलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुपर्नेछ कुनै पनि मेडिकल समस्याहरु हटाउन, जस्तै किडनी समस्या वा मूत्र पथ संक्रमण। मलाई थाहा छ यो तपाईं सुन्न चाहनुहुन्न, पशु चिकित्सक बिल महँगो हुन्छ, तर कहिलेकाँही बिरालो ओछ्यानमा पल्टन्छ (वा सोफे वा कपडामा) किनभने यो दुखाइमा छ र नरम सतहमा पेशाब गर्दा त्यो पीडा कम हुन्छ। यदि पेशाब "मेडिकल" छैन भने यो "व्यवहार" हो जुन निर्धारण गर्न अझ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण, कुनै पनि चिकित्सा समस्याहरू अस्वीकार गरेर, तपाईं व्यवहार समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ।
तनाव हटाउनुहोस्। यदि तपाईंले समस्या ब्यवहारिक हो भन्ने निर्धारण गर्नुभयो भने, स्ट्रेसरलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस्।
Sandbox। बिरालाहरू उनीहरूको कचौरा बक्सहरूको बारेमा लिइन्छन्। उनीहरुलाई सफा र उपयुक्त ठाउँमा राख्नुहोस् ऊ घबराएको महसुस नगरी आफैलाई राहत दिन।
मूत्रको गन्ध हटाउनुहोस्। यदि बिरालाले पसीको गन्ध आवाश्यक रह्यो भने, यसले त्यहाँ पेशाब गर्न जारी राख्नेछ। तपाईंले कुनै पनि सतहबाट पेशाबको गन्ध हटाउनुपर्दछ जहाँ बिरालोले पेसा गरेको छ। यसको लागि विशिष्ट उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्, सल्लाहको लागि तपाईंको पशुचिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस्।
गद्दा रक्षकहरू। यदि तपाईंको बिरालोले तपाईंको ओछ्यानमा पेशाब गरिरहेको छ भने, गद्दे रक्षक खरीद गर्नुहोस्! पानाहरू धोइन्छ, तर गद्दा सफा गर्न अझ गाह्रो हुन्छ। एक गद्दा रक्षकले लामो दौडमा तपाईंको पैसा बचाउनेछ। प्रत्येक एकल ओछ्यानमा गद्दे रक्षक र तकिया कभरहरू राख्नुहोस्।
खिलौने। ओछ्यानलाई खेल्ने ठाउँ बनाउनुहोस्। उसलाई मानसिक उत्तेजित गर्न तपाईंको बिरालोका खेलौनाहरू किन्नुहोस् र उसलाई खुसी बनाउनुहोस् ताकि ऊ ओछ्यानलाई रमाईलो गतिविधिमा सामेल गर्न सक्छ, न कि आफ्नो व्यक्तिगत कचरा बक्ससँग। खेलौनाहरू जस्तै स्टिकमा टिजर पेन, लेजर पोइन्टर, इत्यादि। तिनीहरू उत्कृष्ट छन् र तपाईं जहिले पनि खेलौनाहरूलाई बिरालोको प्रारम्भिक रुचि प्राप्त गर्न सानो क्यानेटिप स्प्रेको साथ स्प्रे गर्न सक्नुहुनेछ।
ढोका बन्द गर। स्पष्ट रूपमा, शयन कक्षको ढोका बन्द गर्नुहोस् यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने। बिरालाहरू ढोका ढकढक्याउँछन् र ढोका बन्द हुँदा ठूलो स्वरले माई forका लागि कुख्यात हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईंले समस्या कसरी सुल्झाउने भनेर थाहा पाउनुहुन्न भने ढोका बन्द गर्न सक्नुहुनेछ, यो सबैका लागि राम्रो छ।
तपाईंले बिरालोलाई कहिल्यै नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन; ऊ कहिले गर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » जिज्ञासा » के गर्ने यदि बिरालो ओछ्यानमा पेशाब गर्दछ
बिरालाहरूका लागि घरगुती फ्लाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने?